ရေအေးနည်းပညာ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
1 ။ ရေချိုးခန်းအတွင်းသွားပါ။
2 ။ တံခါးကိုသော့ခတ်။
3 ။ လျင်မြန်စွာခြေအိတ်အပါအဝင်ခါးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဝတ်အစားကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
4 ။ faucet facing စည်ပိုင်းထဲမှာဒူးထောက်။
5 ။ ထိုအမှုကိုရေချိုးမဘို့ရာခန့်နှင့်ရေအေးကိုဖွင့်သည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
“ Holyyyyyyyyyy shiiiiiiiiiiiiiiiiit!” ဟူသောစကားလုံးများကိုပါးစပ်ထဲတွင် ၁၀ စက္ကန့်လျှင် Grimace
6 ။ ထွက်သွား။
7 ။ ချွတ်ခန်းခြောက်။
8 ။ နောက်ကျောအပေါ်အဝတ်အစားထားပါ။
9 ။ တံခါးကိုသော့ဖွင့်။
10 ။ ရေချိုးခန်းချန်ထားပါ။
(သင်ဒီတစ်ခါလည်းသင်တိုင်းနှစ်နာရီသင်တို့၏ခြေကိုဆေးကြောတဲ့။ သင့်ရဲ့ housemates ပြောပြနိုင်သောအရာကိုသေချာမ?)
ဒါကဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ရေချိုးခန်း takers များအတွက် technique ကိုခြှတျ:
ခ။ တစ်ဦးဆူမိုနပန်းသမားပြိုင်ဖက်များကဲ့သို့ရပ်တယ်။ ကအားလုံးကိုသင့်ရဲ့ခြေထောက်ကျော်သွားကယ်တင်တော်မူ၏။
ဂ။ ပတ်ပတ်လည်သင့်ရဲ့ -bits လေပေါ်မှာပ။ အဲဒါထိတ်လန့်စရာပဲ
ဃ။ ထိုအခါအပြည့်အဝအအေးကိုရွေးပါ။ သင်တစ်ဦးမိုးသည်းထန်စွာအလေးချိန်ရုတ်သိမ်းရေးနေကြတယ်နဲ့တူအသက်ရှူခြင်းစတင်ပါလိမ့်မည်။
င။ မင်းရဲ့ဒစ်ကတစ်နှစ်ခွဲစာ chipolta နဲ့တူတယ်။ စက္ကန့် ၃၀ ထက်မပိုနိုင်ဘူး
f ။ သငျသညျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုခုစဉ်းစားနေလျှင်, ရေအလုံအလောက်အအေးမဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ထပ်ကောင်လေးလည်းရှေးခေတ်တရုတ် Daoists ကမျက်နှာသာပေးမယ့်နှစ် technique ကိုအသုံးပြု:
မနေ့ကငါတကယ်မကောင်းတဲ့တပ်မက်မှုတွေရှိခဲ့ရင်၊ ဒီမှာလူအချို့ပြောတဲ့ရေအေးလှည့်ကွက်ကိုစမ်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ နှောင်းပိုင်းနှောင်းပိုင်းရေပန်းထဲမဝင်ချင်တော့တဲ့ငါဟာပန်းကန်သေးသေးလေးတစ်ခုယူပြီးအေးခဲတဲ့ရေအေးနဲ့ဖြည့်ပြီးငါ့areaရိယာကိုအဲဒီမှာထားလိုက်တယ်။ ဒါဟာ Hilary နာကျင်ခဲ့ပါတယ်, သင်လုံလောက်စွာရှည်လျားပြုလျှင်, တပ်မက်တကယ်ပျောက်ကွယ်သွားပါ။ ဒီတော့တပ်မက်မှုနှင့်အတူဖတ်နေမည်သူမဆိုအဘို့, ဒီလှည့်ကွက်ကိုသုံးပါ! တကယ်အလုပ်လုပ်တယ် ကျွန်တော်ရေချိုးခန်းထဲဝင်တိုင်းအချိန်ကုန်ခံပြီးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါ၊ ချိုလည်းမနေရင်တောင်အဲဒါကိုသုံးမယ်။
ကျွန်မမှာရေပန်းမရှိတဲ့အတွက်ရေမစိုတဲ့အတွက်ရေစုပ်တာကိုရေထဲမျောပါပြီးရေအေးအေးနဲ့လက်တွေထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ဒါဟာကျိန်းသေသည့်တပ်မက်သတ်ဖြတ်။ ၎င်းသည်နိုးထရန်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းလည်းဖြစ်သည်။
ငါအအေးမိရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းတွေအများကြီးယူ - သူတို့တကယ်ကြိုက်တယ်။ အခြေအနေတွေဆိုးလာတဲ့အခါဒီကိုခုန်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိရဖို့ကောင်းပါတယ်။ Cold Showers သည်ယခုကျွန်ုပ်ခံစားနေရသောခံစားချက်နှင့်ဆင်တူသည် ဤအတိဘက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု - စွမ်းအင်သည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးသို့ပျံ့နှံ့သွားသည်။
သငျသညျခံစားနေတယ်ဆိုရင်လွှမ်းမိုးသင့်ရဲ့အနီးဆုံး showerstation သွားပြီးတဦးတည်းယူပါ။ သငျသညျ easilly စတင်ပူနွေးနဲ့စတင်ချင်ပေလိမ့်မည်။ သို့သော်တဖြည်းဖြည်းအေးနှင့်အေးဆီသို့ဦးတည်ကြောင်းအဖုလှည့်။ ထိုအခါ trill ဘို့အတွက်သွားနှင့်ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်ချမ်းယခုအချိန်တွင်အတွက်သွားပါ။ ငါရိုးကိုတက်စတင်ရန်အကြောင်းကိုအခါငါသည်ဤ sucessfully အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်အားလပ်ရက်ခရီးထွက်တော့မည် ဖြစ်၍ ယာဉ်မောင်းသည်နှစ်ရက်စီသွားနိုင်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်တစ်နာရီတွင်ကျွန်ုပ်ရေချိုးပြီးမှန်၌မိမိကိုယ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ပူပြင်းတဲ့နေ့လည်ခင်းပါ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ငါ့အကြိုက်ဆုံးအချိန်။ ငါတွေးမိသည်မှာ“ ငါကားတစ်စီးစီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့အပိုဝင်ငွေလေးတစ်ခုနဲ့မစီးချင်ဘူး၊ ငါပြန်လာရင် nofap လုပ်နိုင်တယ်” ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုစုံတွဲတစ်တွဲမိနစ်ငြင်းခုံ။
ငါရေချိုးခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်နိုင်မယ်လို့တွေးပြီးစစခဲ့တယ်။ ငါမလုပ်ရင်တော့ဒါကြီးကြီးမားမားတော့မဟုတ်ဘူး။ ဒါနဲ့ငါ fapped ။ ငါ buildup ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုအခါအများဆုံးမယုံနိုင်စရာအရာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါရေပူပိတ်လိုက်တယ် [အထွcl်အထိပ်မရှိ] ရေပန်းထဲကထွက်လာတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူတယ်။ Kinda ဟာစူပါဟီးရိုးတစ်ယောက်လိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ယုံကြည်မှုပြန်ပေါ်လာတယ်။ အရောင်တွေနဲ့ကြည့်လို့ရတယ် ငါအစွမ်းထက်တယ်လို့ခံစားရတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ချုပ်တည်းမှုဟာနောက်ဆုံးမှာ nofap ပါဝင်ရန်ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်ပါ
ငါ့ကောင်တာပြေး ဒီကိုဖော်ပြရန်ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။ ငါမပေါ်လာခင်မှာခံစားချက်တွေနောက်ကြောင်းပြန်လှန်လိုက်တယ်။ နောင်တရပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းတီးတဲ့စိတ်ခံစားရတယ်။ အအေးမိတဲ့မိုးကြိုးဟာ fap ကိုတွန်းလှန်ဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့ post ကိုကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်ဒစ်အစားကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကိုစဉ်းစားပြီးအဲဒါကိုသွားရှာခဲ့တယ်။ အဲဒါအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်
ငါ၏အပေါင်ခြံတခုတခုအပေါ်မှာရေခဲဗူးထားပါ။ တစ်ဦးကိုအပူတပြင်းအတိုင်းအတာ၏ကြင်နာပေမယ့်လိုအပ်လျှင်။ အေးစိုက်ထူချစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်က (အဖြစ်ကောင်းစွာတော်တော်လေးသူကပြောတယ်ကောင်းသောခံစားရ) ကွာဟချက်ခဲ့စေသည်။ ငါ၏အတပ်မက်သောစိတ်နှိမ့်ချသွားသည်နှင့်အမျှ, ငါ၏ယုံကြည်မှုမြင့်တက်။
ဤသို့ပြုငါ့ကို၏ပုံရိပ်ကိုရယ်စရာဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ငါ့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်အရာဖြစ်တယ်။ သင်တို့အားငါစည်သွပ်ဗူးအိုးကိုသိ (အဘယ်သူမျှမ Pun ရည်ရွယ်ပါသည်) ကြီးမားတဲ့ဘောလုံးကိုအိုးတလုံးယူပါ။ ။ ခိုင်မြဲစွာကိုနှိပ် .. ငါ .. တစ်ဝက်ရေခဲနှင့်ရေကို၎င်းအနားကွပ်ဖို့ကဖြည့်စွက်ပြီးတော့ .. သူက၌ငါ့တပြင်လုံးကိုလိင်တံနှင့်ဝှေး emerse .. ငါကြီးမားတဲ့ဖန်သို့မဟုတ်ခွက်အလုပ်လုပ်မယ်လို့ခန့်မှန်းပေမယ့်အိုးတလုံးကိုငါ့အဘို့ပြီးပြည့်စုံသောအရွယ်အစားဖြစ်ပါသည် ငါ့အလိုရှိသမျှတစ်ခုလုံးကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အခြေစိုက်စခန်းပတ်ပတ်လည်အိုးတလုံး၏အနားကွပ်, ငါ၏ပျဉ်သို့မဟုတ်ထင်းအချို့အပါအဝင် .. စကားပြောဆိုရန်လုပ်ပါ။ ငါများသောအားဖြင့်လျတ် .. ဖြစ်ပျက်ကြောင့်ရေချိုးကန်ကျော်ဤသို့ပြုပေမယ့်သင်အဖြစ်တာအိုးတလုံးကိုဖြည့်ပါလျော့နည်းရွှေ့ပြောင်းခံရခန့်မှန်းမှုနှင့်မနိုင်ဖြစ်ကြပုံကို engorged သို့မဟုတ်မပေါ် မူတည်. ။ ငါစုံတွဲတစ်တွဲမိနစ်စက္ကန့်အနည်းငယ်ကနေဘယ်နေရာမှာမဆိုဘို့ emerse ။
၎င်းသည်ထင်ရသလောက်ခက်ခဲသကဲ့သို့မသက်မသာမဟုတ်ပါ။ ရေအေး (သို့) အအေးမိရေချိုးခြင်း (သို့) လိင်တံအအေးခံခြင်းသည်တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသော်လည်းကျွန်ုပ်အတွက်တစ်ကိုယ်လုံးစိုစွတ်ခြင်းနှင့်အအေးမိခြင်းကိုမုန်းပါသည်။ ကျွန်တော့်အတွင်းပိုင်းပေါင်ကိုစီးကျနေတဲ့ရေအေးကိုတောင်မကြိုက်ဘူး။ ဒီတော့အိုးကအလုပ်လုပ်တယ် ဒါပမေဲ့အံ့သွအလုံအလောက်ကငါခဏငါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒကိုနှိမ်နင်း။ ငါသိသိသာသာငါ့အဖျားအလိုဆန္ဒကူညီဖို့တစ်ခုခုလုပ်နေတာငါကဲ့သို့၎င်းသည်ငါ့အဘို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုခံစားရပါတယ်။ ပါးစပ်တွင်းရှိအဝလွန်သောအရာဝတ္ထုအချို့ကိုကူညီရန်ထိုရေငွေ့စီးကရက်များကိုအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့ပင်ဓာတုထုတ်လွှတ်မှုမရှိဘဲကျေနပ်အားရစေသည်။ ဤတွင် ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်၏ထူးဆန်းမှုသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုအာရုံစိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အလိုဆန္ဒကိုလျော့ပါးစေရန်နှင့်၎င်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ ၀ တ်မှုန်များကိုဂရုတစိုက်ဖြင့်ထားခြင်း၊ သိသာထင်ရှားသည့်အအေးမိသည့်အအေးမိရောဂါများနှင့်အတူကျွန်ုပ်၏ဝှိုက်စေ့များပြုလုပ်ရမည်။ ရေခဲရေကပါတီကိုပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ငါပြောတာပဲ။ Ice Tea Baggin ရဲ့နည်းစနစ်အတွက်နာမည်တစ်ခုလောက်ပဲစဉ်းစားမိတယ်။ အခွန်နှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ 🙂